गाउँ विकास बारे जिज्ञासा राख्दा वडा अध्यक्ष द्वारा सेवाग्राहिको टाउकोमा रड प्रहार गरेर फरार – Todays Nepal
गाउँ विकास बारे जिज्ञासा राख्दा वडा अध्यक्ष द्वारा सेवाग्राहिको टाउकोमा रड प्रहार गरेर फरार
जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद तिमल्सिनाको समूहले स्थानीय अग्नी तामाङ माथि आक्रमण गरेका छन् ।
तालढुंगा बजारमा सडकलाई व्यवस्थित बनाउने गाउँपालिकाको योजनाकोबारेमा बुझ्न खोज्ने तामाङ माथि तिमल्सिनाको समूहले बुलुकाको समय पारेर आक्रमण गरेको बुझिएको छ ।
निर्माणाधिन सडककोबारे जिज्ञासा राख्दा आक्रमण
खानीखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को गाउँ परिषद्बाट तालढुंगा मासबारीसम्मको भित्री सडक सरसफाई शिर्षकमा ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर या टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर वडा अध्यष तिमल्सिनाले नत उपभोक्ता समिति बनाए न त टेन्डर नै आव्हान गरे । तर काम भने अघि बढाएको थियो ।
स्थानीय उपभोक्ता अग्नि लामाले १९ गते बिहान वडाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटेर सडकको कामबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
लामालाई वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाले आफू ५ वर्षको लागि राजा भएकोले जे पनि गर्ने बताएका थिए । ‘म ५ वर्षको लागि निर्वाचित भएको हुँ, ५ वर्षको लागि म यहाँको राजा हुँ ।’ स्थानीय नेकपाका नेता शेखर तामाङले वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाईलाई उदृत गर्दै भने, ‘के गर्ने नगर्ने भन्ने मेरै कुरा हो, तिमीहरुलाई सल्लाह गर्ने र सुनाउने मेरो काम होइन ।’
सार्वजनिक महत्वको काममा यसरी चिन्ता र जिज्ञासा राख्न पाउने कुरा समेत बेवास्त गर्दै अग्नी माथि आक्रमण गर्नु ठीक नभएको बताए ।
यसैबीच १९ गते बिहान र दिउँसो पटक–पटक लामा र तिमिल्सिना बीच विभिन्न चरणमा विवाद चल्दा लामाले विकास निर्माण लगायतका काममा जनसहभागितालाई जोड दिइरहेको थियो । तर यो कुरा वडा अध्यक्ष तिमल्सिनालाई मन परिरहेको थिएन।
अग्निमाथि आक्रमण गर्न भट्टिमा रक्सिको बोतलका साथ प्रतीक्षा
त्यहीं दिन साँझ अग्नि आफ्नो घरतिर फर्किदै थिए । यता वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाको समूह भने ईश्वरी दुलालको होटलमा रक्सी खाँदै उनको प्रतिक्षामा थिए । एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बेलुका अन्दाजी सवा ८ बजेको आफ्नो बाटोमा अघि बढिरहेका अग्निलाई ईश्वरी दुलालकै होटल अगाडि पुग्दा होटलमा बसिरहेका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले होटेलमा बोलाएका थिए ।
‘म त्यहाँ किन आउनु, त्यहाँ आउनुपर्ने मेरो कुनै काम छैन, म आउँदिन ।’ भनि अग्नीले वडा अध्यक्षलाई जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि ‘तपाई ठूलाठूला कुरा गर्ने, तपाईसँग कुरा गर्नु छ, यता आइहाल ।’ भनेर वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाले ठूलो स्वरले कराएका थिए ।
वडा अध्यक्षले ठूलो स्वर गर्ने वित्तिकै होटलवालाका छोराले अग्निमाथि हातपात गरे । उनीमाथि त्यसपछि वडाध्यक्ष तिमिल्सिना, ज्ञानेन्द्र फुयाँल, सञ्जय गोले र होटलवालाका छोराले निरन्तर आक्रमण गरे । वडा अध्यक्षले रड प्रहार गर्दा अग्नी भूईमा ढले
सामूहिक आक्रमणको शिकार बनेका अग्नी माथि वडा अध्यक्षले रड प्रहार गरे । स्रोतका अनुसार वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाले पहिला नै रड व्यवस्था गरेका थिए । ‘रड प्रहार गरेपछि उनी भुईमा बेहोस भई ढले ।’ प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘स्थानीयले नछेकेको भए उनलाई मार्ने थिए ।’
होसमा आएपछि लामा घटनाको मौखिक उजुरी दिन प्रहरी चाँैकी तालढुंगा पुगे । टाउकोबाट निरन्तर रगत बगिरहेको कारण तालढुंगा स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न पुगे ।
पिडितलाइ नै प्रहरिले गरे गिरफ्तार:
२३ गते विहान करिब ४ बजेको थियो । पिडित अग्नी तामाङ ओछ्यानमै थिए । प्रहरी उनलाई गिरफ्तार गर्न उनको घरमा पुगेका थिए ।
‘मलाई एउटा अपराधिलाई जस्तै गरि गिरफ्तार गरे ।’ अग्नीले भने, ‘जो चोर उसकैको ठूलो स्वर भनेको जस्तै वडा अध्यक्षको पिटाई खाने पनि मै, प्रहरीले मलाइ नै गिरफ्तार गर्ने ?’
गिरफ्तार पछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ल्याएका थिए । उनी नै पिडित देखिएपछि प्रहरीले छोडिदिएका थिए ।
कुरा गर्नै चाहेनन वडा अध्यक्ष
यो घट्नाको विषयमा वडा अध्यक्ष तिमल्सिनासँग तेमाल अनलाइनले जिज्ञासा राख्न खोज्दा केही बोल्नै चाहेनन् । उनको मोवाईल नं. ९७५१०४५५४९ मा सम्पर्क गर्दा आफू काठमाडौंमा रहेकोले पछि बोल्छु भन्दै टारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलिलाइ पनि कारबाही गर्न गृहमन्त्री बादल लाई आग्रह ! कारण यस्ता छन !
होसियार ! तपाई हामीले किनेर खाने दूधमा कपडा धुने साबुनमा प्रयोग हुने रसायन मिसाएको भेटियाे